Dhageyso:-Guddoomiye Cumar Filish oo ka masayray Xilalka loo magaacabay dhalin yarada kuna tilmaamay Ciyaalka Xaafada. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Dhageyso:-Guddoomiye Cumar Filish oo ka masayray Xilalka loo magaacabay dhalin yarada kuna...
Dhageyso:-Guddoomiye Cumar Filish oo ka masayray Xilalka loo magaacabay dhalin yarada kuna tilmaamay Ciyaalka Xaafada.
Muqdisho (Caasimadatimes)-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu soo dhaweeyay taliye kuxigeenka Cusub ee Booliska Soomaaliyeed Cismaan Cabdullaahi Kaniif ayaa ka hadlay habka madaxda Dowladda u maraan xilalka ay magacaabayaan.
Waxaa uu sheegay in Madaxda Dowladda Federaalka ay xilalka u salaxeen ciyaalka Xaafada,hayeeshee uu rajeynayo in doorkooda qaadaan doonaan raja weyna uu ka qabo inay la yimaadaan isbedel ka duwan madaxdii ka horeeysay.
“Runtii xilalka Dowladda waxaa loo salaxay Ciyaalka Xaafada,balse waxaan rajeynayaan inay doorkooda qaadan doonaan kana duwanan dooonaan kuwii ka horeeyay,Cismaan Cabdullaahi,Xijaar , Janeraal Bashiir Maxamed Jaamac iyo Wasiirka Amniga waxaan isla nahay Ciyaalka Xaafada ayuu yiri”Guddoomiye Cumar Filish.
Hadalka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa kusoo aadaya xilli Madaxda Dowladda Federaalka ay xilalkii ugu badnaa u Magacaabeen dad Dhalinyaro ah,kuwaas oo aan khibrad badan u laheyn xilalkaas.
Previous articleMuqdisho yaa u maqan oo ay tabaysa oo ka qabta kuwa sidaan u galay.
Next articleSAWIRO:-Kulamo lagu xoojinayay heshiisiinta beelo dagaalamay oo ka dhacay Guriceel
Maxkamadda sare ee Kenya oo bilowday tallaabadii ugu horreysay ee Kenya...
Kheyre Oo si adeg Oga horyimi Musharax nimada Cabdulaahi Faarax ee...